Dacwadda ICJ Kenya-Soomaaliya: Madaxwenihii Dacwadda Badda geeyay maxkamadda oo dhaliiyay dowladda madaxweyne Farmaajo
Wednesday May 20, 2020 - 16:48:46 in Wararka by Burco Staf
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda (ICJ) u gudbiyay dacwadda muranka xadka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa dhaliil usoo jeediyay dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Shir jaraa'id oo uu Xasan Sheekh Maxamuud ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu uga falceliyay go'aankii ugu dambeeyay ee ay garsoorka maxkamadda ICJ mar kale dib ugu dhigeen dhageysiga kiiska.
Wuxuu eedeyn kala dul dhacay xukuumadda hadda jirta.
"Qaddiyadda badda afar sano ku dhawaad oo lasoo dhaafay waxay taagan tahay meeshii ay dowladdan ugu timid, waxba kama dhaqaaqin. Saddex jeer oo isku xigta in dib loo dhigo, oo mar walba Kenya codsigeeda daraaddiis dib loogu dhigo dowladdeennuna aaney ka hadlin - waan diiddaneyn unbey na dhahaa laakiin inay diiddaneyd ay dadka tusi weydo - shaki badan ayey arrintaas abuurtay," ayuu yiri madaxweynihii hore.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay inay ka xun tahay dib u dhigista.
Inkastoo xukuumadda federaalka Soomaaliya ay maalmihii lasoo dhaafay si weyn uga biyo diidsaneyd dib u dhigista dacwadda ayaa hadda sheegtay inay u hoggaansami doonto jadwalka cusub.
Image captionRa'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya, Mahdi Maxamed Guuleed wuxuu madax u yahay kooxda Soomaaliya u qaabilsan dacwadda
Makamadda Caddaaladda Caalamiga ah ee ICJ ayaa shalay soo saartay go'aanka ay dib ugu dhigeyso dhageysiga kiiska muranka badda, iyadoo sababtana ku sheegtay codsi uga yimid Kenya iyo saameynta xanuunka coronavirus.
Maxaa ku jaban dib u dhigista kiiska?
Su'aashaas waxaan hor dhignay Dr Afyare Cilmi, oo ah falanqeeye ku xeel dheer arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah.
"Kolley Soomaalidu dabcan way jeclaan lahayd in waqti hore arrintan lagu kala baxo, laakiin hadda anigu ma arko wax weyn oo dhib ah haddiiba kiiska uu wali yaallo maxkamadda," ayuu yiri.
Dhanka kale wuxuu qeexay in sida aragtidiisa ah ay hadda xaaladdu ka weyn tahay codsiga Kenya.
"Hadda dhacdadan ma aha wax Kenya u gaar ah, wax Soomaaliya u gaar ahna ma aha, waa wax adduunka oo dhan ku wajahan waana wax saameyn ku yeelan doona maxkamadda iyo sida ay u shaqeyn doonto wuxuu ula jeedaa sababta dib u dhigista kiiska oo uu qeyb ka yahay coronavirus), marka waxaan isleeyahay haba soo daahdee waxay gaari doontaa in si uun loo kala baxo," ayuu yiri Dr Afyare.
Bisha March ee sanadka dambe ayaa loo asteeyay kiiskan.
Bishii Oktoobar ee sannadkii 2019 : Maxkamadda Caddaallada Adduunka waxay dib u dhigtay dhageysiga kiiska badda oo xilliggaas la qorsheeyay in uu dhaco 4-ta Nofeembar, balse waxay ka dhigtay bisha Juun ee sannadka 2020-ka.